ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးကစားသမား Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "သင်းအုပ်ဆရာ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝကြိမ်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ဒါဟာသူတစ်ဦးသင်းအုပ်ဆရာများနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝ, ရိုးရာဓလေ့ပုံပြင်, ရှေ့တော်၌မိမိဂိုဏ်းဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းကိုပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းမိမိအရောင်စုံဆံပင်ပုံစံတွေနှင့်သက်တောင် ယူ. အဘို့သူ့ကိုအောက်မေ့။ သို့သော်တစ်ခုသာလက်အနည်းငယ်ပရိသတ်တွေအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Taribo အနောက်ရဲ့ဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Taribo အနောက်ဆိပ်ကမ်း Harcourt, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မတ်လ 26 ၏ 1974th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောငယ်ရွယ်နိုင်ဂျီးရီးယားလိုပဲဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ဂို့မှရွှေ့, ဒါကြောင့်အနောက်လုပ်ခဲ့တယ်လိမ့်မယ်။ သူဂို့တယ်တဲ့အခါ, အနောက်နိုင်ငံများ Shomolu ခရိုင်၌သေဆုံးအလုပ်အကိုင်များတစ်စီးရီး, အနောက်နိုင်ငံများ Bronx နယူးယောက်စီးတီးမှနှိုင်းယှဉ်သောအန္တရာယ်ရှိ, အုပ်စုလိုက်စီးဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကဆင်းကိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူ၏စကားအတွက် ...
'' ဒေသခံဂိုဏ်းအဆိုပါဧရိယာ Boys အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်သူတို့တဘက်၌ဖြစ်စေ ရှိ. , ငါကရန်သူများကိုအတိုင်းထက်မိတ်ဆွေအဖြစ်ကသူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ထင်။ Break-ins, တိုက်ပွဲများ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် muggings ထိုနေ့၏အမိန့်ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ကောက်ကာငင်ကာလမ်းပေါ်မှာလူတွေခွက်လိမ့်မယ်။ ''
သူကတစ်ဦး cultist ဖြစ်သကဲ့သို့ဂို့ရှိနေစဉ်အနောက်ရာဇဝတ်မှုများ၏ရရှိသောအပေါ်အားဖြင့်လေ။ သူလည်းလမ်းပေါ်ဘောလုံးကစားခြင်းဖြင့်သူ၏လူကြိုက်များကျားကန်ပေးခဲ့ကြသည်။ သူနဲ့သူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းခိုးယူပိုက်ဆံတစ်အိတ်နှင့်အတူလမ်းများမှတဆင့်ပြန်လာသောအဖြစ်, ပြီးတော့ ... တစ်နေ့မှာသူတို့ကငွေသားတောင်းဆိုသူတစ်ဦးပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ကချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ Moni ကျော်ကဒီပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းတိုက်ခိုက်နေပြီးနောက်။ အနောက်၏အဆွေခင်ပွန်းငွေကိုအိတ်လွှဲပြောင်းပေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အာဏာမဲ့သူ့မိတ်ဆွေအနောက်နှင့်အတူလမ်းပေါ်မှာအသေသတ်ခြင်းကိုဓားဖြင့်ထိုးနှင့်တာကတော့တယ်။
Taribo အနောက်နိုင်ငံများ Moni နှင့်အတူထွက်ပြေးဆိပ်ကမ်း Harcourt ၌သူ၏မိခင်မှပြန်လာ၏။ လူဆိုးဂိုဏ်းများ၏အရုပ်ဆိုးအခြမ်းကိုမြင်ပြီးနောက်သူဘောလုံးမှအပြည့်အဝစွမ်းအင်မွှုပျနှံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှ Rising
ဆိပ်ကမ်း Harcourt မှာအနောက် Obanta ယူနိုက်တက်နှင့်အတူထွက်တော့တာပဲ။ ဒေသခံပြိုင်ပွဲအတွက်ပရိသတ်တွေနှစ်သက်စေပြီးနောက်အနောက်နောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ Sinclair အားဖြင့်ငါးမန်းဘောလုံးကလပ်အဘို့ကစားရန်သူ့ကိုစုဆောင်းသူတစ်ဦးကင်းထောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကနောက်ထပ် 1989 အတွက်ငါးမန်းမပြန်မီ, 1990 အတွက် Obanta ယူနိုက်တက်နှင့်အတူပညာရှင်ပီသစွာကစားရန်ပေါ်သွား၏။ ငါးမန်းကနေသူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော pic ကိုတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် 1991 အတွက် Julius Berger မဝင်ခင်, 1992 အတွက် Enugu Rangers အဘို့ကစားရန်ပေါ်သွား၏။
အစောပိုင်း 1993 အတွက်အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတွေအပြီးတွင်အနောက် Guy Roux ကဦးဆောင်ပြင်သစ်ဘက်မှာ Auxerre ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူဟာ 1996 နွေရာသီအိုလံပစ်မှာရွှေတံဆိပ်အနိုင်ရသောအိုလံပစ်အသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အနောက်ပြိုင်ပွဲအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းမိနစ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ မိမိအတောက်ပ-အရောင်ကျစ် no-ဒဏ်ဍာရီနောက်ခံလူတစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာသင်စေး၏အခြားဘက်ခြမ်းကနေကြည့်ရှုနိုင်မယ့်ဆံပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိဆံပင်ကိုအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုပြုသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်မိမိအခက်ခဲ ယူ. နှင့် barnstorming သူသညျမိမိနေအိမ်တိုင်းပြည်အတွက်ကစားသည့်အခါအထူးသဖြင့် surges ကိုပြု၏။
အိုလံပစ်အနိုင်ရသည်သူ၏န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖုန်းခေါ်အင်တာမီလန်မီလန်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အင်တာမီလန်မှာသူနှင့်အတူကစား ဒီယေဂိုရှိမောင် AKA Cholo နှင့် ရော်နယ်ဒို Luis Nazárioက de Lima.
သူနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ပယောဂဆရာနှင့်အတူဖျော်ဖြေထုံးတမ်းမှတဆင့်သို့ရောက်လာသောအခိုင်အမာသောဖလားအနိုင်ရဖို့ Nerazzurri ကာကွယ်ရေးလိုင်းဦးဆောင်သည့်အဖြစ်အနောက်တစ်ယူအီးအက်ဖ်အေဖလားဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အီတလီမှာအောင်မြင်မှုပြီးနောက်အနောက်ဂျာမနီမှာ Kaiserslautern ဖြစ်လျှင်, ပရီးမီးယားလိဂ်၌သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးနေ, ဒါဘီကောင်တီမှာရာသီဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Taribo လမ်းတစ်လျှောက်ဥရောပတိုက်တွင်အများအပြားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်သူ့ကို ယူ. တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပင်အီရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
အဆိုပါ 1996 အိုလံပစ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနိုင်ဂျီးရီးယားကစားသမားနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးအကြီးအမြိုးသမီးတသို့မဟုတ်ရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်စကားကိုဝင်ရှိပါတယ်။ Taribo အနောက်အဘို့, အကြာတွင်သူ့ဇနီးလှည့်သူ name- Adenuke ကအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ရည်းစားရှိ၏။
သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်အချိန်တွင်ငြင်းအများဆုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းနှင့်ဧည့်သည်စာရင်းအလားတူကာလတှငျကငျြးပခဲ့သည်အခြားမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများတစ်အလုံးအရင်းကနေခွဲခြားပါသေးသည်။ သူတို့က nuptial ထုံးချည်ထားသောသုံးပတ်အကြာတွင်သို့သော်အဆိုပါစုံတွဲကွဲကွာတယ်။ ဒါဟာစွပ်စွဲချက်များနှင့်ဖောက်ပြန်၏တန်ပြန်စွပ်စွဲချက်များ၏နိုးထအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရေးသို့သုံးပတ်, မီဒီယာကသူ့ဇနီးသည်ရဲ့ဘက်ထရီကိုကန့်သတ်ထားသူ၏ matrimonial တာဝန်များကိုလျစ်လျူရှုထားဘို့ Taribo ရဲ့ penchant ၏ Atinuke နေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူရှိနေသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Taribo, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သံသယ, မုန်းတီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းကငျးမဲ့ခွငျးအားဖွငျ့အနှောငျ့အတုအယောင်အဖြစ်အိမ်ထောင်ရေးဖော်ပြခဲ့သည်။ သူလည်းဖောက်ပြန်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးသစ္စာဂတိဖို့ကတိကဝတ်မရှိခြင်း၏ Atinuke စွပ်စွဲတယ်။ ဤသည်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိနေစဉ်သူမတစ်ဦးလူကြိုက်များဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်သောအခါ Atinuke တစ်ချိန်ကလူကြိုက်များဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ချိန်းတွေ့ခံရဖို့ကောလဟာလသတင်းများအရခဲ့သည်တစ်ကြိမ်ရောက်လေ၏။
နှစ်ခုထူးဆန်းတဲ့ bedfellows အကြားခြားနားချက်ဖျက်သိမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသွားလာသောကွာရှင်းမှုအတွက်တရားရုံးတွင်အဘို့အခေါင်းနှစ်လုံး။ Taribo သတင်းများအရအီတလီမှာလာမယ့်အဆင့်အထိကသူ့ကြေးအလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, Atinuke အခြားဆကျဆံရေးအပျေါသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Charm နှင့် Babalawos အသုံးပြုခြင်း
အနောက်တစ်ကြိမ်ဖယောင်းတိုင်ကိုမီးရှို့သူဂိမ်းမတိုင်မီစုန်းမဆရာဝန်များမှရရှိသောအရာမှော်ကျောက်များကိုင်ဆောင်ရန်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကအများဆုံးကစားသမားများနှင့်နည်းပြများများသောအားဖြင့်ပယောဂဆရာကို အသုံးပြု. ၏လုပ်ရပ်အထိပိုင်ဆိုင်ကြဘူးဆိုနောက်ထပ်သွား၏။ သူဟာဘောလုံးသမားနေစဉ်သူသည်လုပ်ရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဆိုပါကတနိုင်း Ayejina, နိုင်ဂျီးရီးယားလာကြတယ်သတင်းစာများအတွက်အားကစားသတင်းထောက်များကမေးတဲ့အခါသူကဖြောင့်နှင့်အတူ replied ဟုတ်သည်!. သူ၏စကားအတွက် ...
"ကလူ Charm နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းပြောဆိုရန်ကျဆင်းဘာဖြစ်လို့၏သင်တန်းဟုတ်ကဲ့, ကျနော်မသိရပါဘူး။ ဘောလုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများကြီးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်များရှိပါသည်အခါ, သငျသညျအားကစားကွင်းကိုကြည့်, သင်လူတို့, အမှုအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုသွန်းလောင်းပေးပရိတ်သတ်များတွေ့မြင်; ဝိဇ်ဇာဆရာတို့ ရှိပါတယ်, voodooists ရှိပါတယ်။ ငါမသိဘဲအခါငါ့အကစားကာလ၌, ငါသည်အချို့သောရရန်အသုံးပြု mallams နှင့် babalawos ကျနော်တို့ (အမျိုးသား) စခန်းမှလုယူသောငါတို့အဘို့အ Charm အောင် (ရိုးရာဆရာဝန်များက) ။ တခါတရံသူကတစ်ခါတစ်ရံတွင်မပြုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တချို့ကလပ်များတွင်တိုင်းဂိမ်းမှီ, ကလပ်၏ဥက္ကဋ္ဌသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်သင်တို့နှင့်အတူဆော့ကစားရန်ကံကောင်းကျက်သရေကိုငါပေးမည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ခြေအိတ်၌ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဆော့ကစားရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အယူသည်းယုံကြည်ချက်င်; ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပွဲအနိုင်ရလိုကူညီပေးနိုငျသညျ။
ဆီနီဂေါ, Burkina Faso, ဇိုင်ရီသို့မဟုတ်ပင်နိုင်ဂျီးရီးယားကနေအာဖရိကဝိဇ်ဇာဆရာတို့နှင့်ဗေဒင်ဟောသောသူချိတ်ဆက်ထားကြသူအချို့နည်းပြရှိပါတယ်။ ဤလူများသည်ထိုပွဲကစားနေကြသည်မီကပင်ထိုအနည်းပြဂိမ်းရလဒ်များကိုပေးဖို့တိုင်ပင်နေကြသည်။ တစ်ဦးပွဲစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကို, ဤလူထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုသူတို့မှော်နှင့် Charm အားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ယုံကြည်ကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ အဲဒါကိုယုံကြည်သောသူတို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါကမွငျလြှငျ, ငါကကြုံတွေ့ငါကိုသုံးခြင်းနှင့်ငါကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကစားသမားနှင့်အတူရှိ၏။ ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့လူများကငြင်းပယ်နေကြသနည်း ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ Charm နှင့်ထုံးတမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာနေဆဲတည်ရှိ။ "
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူဘယ်လိုပြောင်းတယ်
အနောက်၏ညီမတစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာသူစိတျရှညျအမည်ရှိအခါ, မီလန်၌သူ၏သစ်ကိုအိမ်ပြန်ဖို့အံ့သြစရာအလည်အပတ်ပေးဆောင်။ အနောက်ကကိုထည့်လေ့မရှိသကဲ့သို့၎င်း,
'' ငါသည်တံခါးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ငါသူမ၏ကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ဟုပြောဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီသူမကပြောသည်: '။ သင်ကဤကဲ့သို့သောအိမျ၌နထေိုငျဖို့ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမည်' ' သူမသည်အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးဆိုး aura ခဲ့ပြောတယ်, ငါဖျော်ဖြေခဲ့ထုံးတမ်းဘယ်လိုမေးတယ်။ Taribo အနောက်သူမ၏ကြေညာချက်အားဖြင့်ဒေါသထွက်တယ်, သူပြောကြားခဲ့့သည်က ... "ဟုသူမကငါ့နှမမပြဘူးသည် အကယ်. ငါသူမ၏ထွက်ကန်ကြလိမ့်မယ်။ "
ဘောလုံးသမားတွေအများကြီးလိုပဲ, သူကအရမ်းအယူသည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခငျ၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူလည်းမိမိနှမနောက်ထပ်သူမမှော်အတတ် energies ကိုခံစားရနိုင်ကြောင်းသူ့ကိုပြောသည်, သူနှစ်ဦးကိုခွေးကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းဆိုပါတယ် - တဦးတည်းအဖြူနှင့်တစ်အနက်ရောင် - မိမိအိမျ၌ထွက်တိုက်ခိုက်နေ။ Taribo အတွက်ဘောလုံးသမားပြီးတော့ဖြည့်စွက်သည့်အခါဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူမ၏စကားအားဖြင့်နည်းနည်းစိတ်မရှည်ရတဲ့နှင့်လျင်မြန်စွာသူလေ့ကျင့်ရေးမှာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသူမ၏ကြားပြောလေ၏။ သည်းခံခြင်းသူမ၏အစ်ကိုလေ့ကျင့်ရေးမှပြန်လာသောသည်အထိဆက်နေရန်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အစ်ကိုပြောင်းဘုရားသခင်ဆီဆုတောင်းစတင်ခဲ့သည်။
အနောက်လေ့ကျင့်ရေးမှပြန်လာသောအခါ, သူ့အစ်မကိုပိုပြီးသတင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူထွက်ခဲ့သည်နေစဉ်, သူမကအိပ်ပျော်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဘုရားသခငျသညျသူမသူ့ကိုအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်သောအရာကိုအထဲကညွှန်ပြခြင်းနှင့်နောက်ထပ်၏အကျင့်၏အကျိုးဆက်များသူ့ကိုသတိပေးဘဝသူ၏ဆိုးယုတ်သောလမ်းမှသူ့ကိုကွာတောင်းဆိုခဲ့ Taribo အနောက်ပြောနေ, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။
'' ငါသည်ဘုရားသခငျ့အကူအညီလိုအပျကွောငျးကိုပြီးရင်သဘောပေါက် '' အနောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သူ့ကိုဝန်ခံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကသူ့အစ်မနှင့်အတူဆင်းဒူးထောက်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးပဌနာစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဆုတောင်းပဌနာသည်အတိုင်း, အိမျတျော၌ရှိသမျှသောအံဆွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးမှာပိတျထားမှစတင်ခဲ့သည်။ Taribo တစ်ချိန်ကပြန်ပြောပြ ...
'' ငါကကိုယ့်ကိုလေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်အတွေးငါ့ဦးခေါင်းသို့ ဝင်. ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောတံခါးအဖြစ်ကောင်းစွာ bang မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကနေတစ်ခုခုနဲ့တူခဲ့ပေမယ့်ငါကအဖြစ်မှန်သိခဲ့တာက. ငါအတွင်းပိုင်းပူနွေးသောခံစားမှုတွေ့ကြုံ။ " နှမအထံတော်သို့လှည် ့. ကဆိုပါတယ်သောအခါဤဖြစ်ခဲ့သည်: "Taribo, သခင်သင်ကသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ "
သူအမည်ပြောင်တယ်သောအခါဤခဲ့သည် '' သင်းအုပ်ဆရာ '' သူကသူ့ကိုတောင်းဆိုစတင်လူတိုင်းကိုပြောသည်အဖြစ်။ သူ၏နှမသူ့ကိုလန်ဒန်, အဘယ်သူ၏တရားဒေသနာအနောက်ရဲ့ယုံကွညျခွငျးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်သူ၏တည်ထောင်ရန်သူ့ကိုဖျောင်းဖျသင်းအုပ်ဆရာ Ayo ဒွန်-Dawodu အတွက်အခြေခံတဲ့တရားဟောဆရာ၏တိပ်ခွေကိုပေး၏ မုန်တိုင်းဓမ်မအမှု၌အမိုးအကာ Affori, မီလန်တစ်ဦးမြောက်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံး၌တည်၏။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာကြေးတာဝန်
Taribo အနောက်ကသူ့မီလန်အခြေပြု၏အခက်တည်ထောင်ရန်ဂို့နိုင်ဂျီးရီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ခင်ကတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး အဆိုပါမုန်တိုင်းအံ့ဖွယ်ဝန်ကြီးများအတွက်အမိုးအကာries အားလုံးနိုင်ငံများအသင်း။ သငျသညျငှါအဖြစ်ကြိုးစားပါ, သင်ရုံစိတ်ကူးမနိုင် မာရီယိုရှုံး ဂါနာအတွက်တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ။
တောင်မှဘောလုံးကွင်းကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းမှာ Taribo Ajegunle, သူ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလက်ရှိအသက်တာ၏သူ့ယခင်လမ်းနေသော gangstars ပြောင်းရှိရာနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်ကြားသောမြို့အတွက်အစွမ်းထက်ခရူးဆိတ် (အောက်တွင်ပုံ) စည်းရုံးရေးအားဖြင့်နောက်လိုက်စုဆောင်းဆက်ပြောသည်။ Taribo Ajegunle ၏လမ်းများပေါ်တွင်သူတို့အဘို့အမြဲတမ်းစင်တာရန်ပုံငွေ $ 2million ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
လူတိုင်းကသူလူအစုအဝေးရန်အလွန်ရက်ရောခြင်းနှင့် outspoken ခဲ့သိတယ်။ အများစုမှာကြိမ်အစားခရူးဆိတ်များအတွက်ကြော်ငြာအတွက်, Taribo အောက်ကဓါတ်ပုံကိုတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်တရားကိုဟောများအတွက်ဖွင့်လှစ်ဖို့တတ်၏။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နာကျင်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ
ဇန်နဝါရီလ 2007 ခုနှစ်တွင်အနောက်-Croatian ကလပ် Rijeka နှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးရန်နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သူကနောက်ဆုံးမှာအီရန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်သြဂုတ်လ 2007 အတွက် Paykan နဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အနောက်ကသူ့စာချုပ်သာသုံးလအကြာတွင်အပြန်အလှန်သဘောတူညီခကျြဖွငျ့ရပ်စဲရှိခြင်း, ကလပ်နှင့်အတူတစ်ဦးက start လုပ်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 ခုနှစ်တွင်အနောက်သတင်းများအရ, ရှေး Division ကလပ် Xerez ပူးပေါင်းခံရဖို့အခိုင်အမာ ဒါပေမယ့်ကလပ်ရဲ့သမ္မတကသူ့ဆိုက်ရောက်မဆိုအသိပညာငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်အနောက်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...'' ငါမီလန်ကိုသွားနှင့်တဲ့ professional သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လိမ့်မည် '' သူကပြောပါတယ်။ '' ငါကနည်းပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်လမ်းမရှိသောရှိပါတယ်။ ဒီ 'ငါ့အဘို့ဘောလုံး၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ် သူကများ၏အတွေးရယ်တတ်၏။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အသက်အရွယ်အငြင်းပွားမှု
2010 များတွင်ထိုသို့အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ကဲ့သို့သောအခြားအနိုင်ဂျီးရီးယား International, အစီရင်ခံခဲ့သည် ဂျေး-ဂျေး Okocha, Nwankwo Kanu နှင့် Obafemi Martins, သူတို့ကအခိုင်အမာထက်မှာအနည်းဆုံးခုနစ်နှစ်အဟောင်းတွေခဲ့ကြသည်။ ဧပြီလ 2013 ခုနှစ်, ŽarkoZečević, Partizan ဟောင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအနောက်ကသူ၏အခိုင်အမာအသက်အရွယ်ထက် 12 နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေကဆိုသည်။ မကြာမီတွင်နောက်မှ, အနောက်နိုင်ငံများစွပ်စွဲချက်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။
Zarko Zecevic ဆားဗီးသတင်းစာကိုပြောသည် Vecernje Novosti: "[အနောက်] သူ 28 ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သာနောက်ပိုင်းမှာသူ 40 ခဲ့ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်သူနေဆဲကောင်းစွာကစားခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါအဖွဲ့သည်အပေါ်သူ့ကိုရှိခြင်းနောင်တမရကြဘူး။ "
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!.